Myanmar agrees to the appointment of Mr. Nicholas Coppel as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Australia to the Republic of the Union of Myanmar with residence in Yangon – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the appointment of Mr. Nicholas Coppel as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Australia to the Republic of the Union of Myanmar with residence in Yangon.
Mr. Nicholas Coppel was born on 13 March 1958. He graduated with Bachelor of Economics from the Australian National University and Master of Business Administration from London Business School. From 1986 to 2013, he served in various capacities at the Australian Embassies in Washington, Manila and Port Moresby and also at the Department of Foreign Affairs and Trade. Since November 2013, he has been serving as Assistant Secretary of the People Smuggling Taskforce at the Department of Foreign Affairs and Trade.
Dated. 10 February 2015
ရန်ကုန်မြို့တွင် အခြေစိုက်သည့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ သြစတြေးလျနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ နီကိုးလတ်ကော့ပယ်လ်အား သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ရန် အဆိုပြုခြင်းကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရက သဘောတူပြီးဖြစ်သည်။
မစ္စတာနီကိုးလတ်ကော့ပယ်လ်အား ၁၉၅၈ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ၎င်းသည် သြစတြေးလျ အမျိုးသားတက္ကသိုလ်မှ စီးပွားရေးဘာသာရပ်ဖြင့် ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး လန်ဒန် စီးပွားရေးကျောင်းမှ စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုမဟာဘွဲ့ ရရှိခဲ့သည်။ မစ္စတာနီကိုးလတ်ကော့ပယ်လ်သည် ၁၉၈၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အထိ သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဝါရှင်တန်မြို့၊ မနီလာမြို့နှင်‌့ ပို့မောစဘီမြို့ရှိ သြစတြေးလျသံရုံးများတွင် ရာထူးအဆင်‌့ဆင့်ဖြင့် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလမှ ယနေ့အထိ သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လူကုန်ကူးမှု တားဆီးနှိမ်နင်းရေးအထူးအဖွဲ့တွင် လက်ထောက်အတွင်းရေးမှူး အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်